संसदमा विश्वासको मत: देउवाले भने> प्रधानमन्त्री ज्यू छातीमा हात राखेर भन्नुहोस अहिलेको अवस्था कसले ल्यायो ? – CBKhabar.com | Nepali News Portal
संसदमा विश्वासको मत: देउवाले भने> प्रधानमन्त्री ज्यू छातीमा हात राखेर भन्नुहोस अहिलेको अवस्था कसले ल्यायो ?
By सन्दीप खत्री / २७ बैशाख २०७८, सोमबार १४:५२ 2021-05-10 / breaking, समाचार
वैशाख २७ । आज प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन जारी छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई विश्वासको मत मागिसक्नुभएको छ । आफूले गरेका र आगामी दिनमा गर्ने कार्यहरुवारे बताउँदै ओलीले आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेपश्चात अहिले दलीय आधारमा नेताहरुले बोल्नेक्रम जारी रहेको छ । अहिले पहिला नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले संसदमा आफ्ना भनाइहरु राखिरहुनभएको छ ।
उहाँले संविधान निर्माणमा रगत पसीना दिने सहिदहरु देखि नयाँ पिढीहरुलाई सम्वोधन गर्दै कोभिडले आक्रान्त देश र जनतालाई चाँडै कोभिड मुक्त गराउन सवै लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साथै कोभिड का कारण निधन भएकाहरुप्रति श्रद्धान्जली दिँदै देउवाले राजनीतिक गतिविधिहरु लोकतान्त्रीक मुल्य मान्यतामा आधारित भएर अघि वढ्नुपर्छ भन्नुभयो । अहिलेको राजनीति संविधान र नैतिक धरातलमा उभिएको छ के देश नेपाली जनताको हितमा छ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
संसदीय चुनावपछि झण्डै दुइ तिहाई मत प्राप्त गरी सरकार चलाएर तीन वर्ष पुरा हुँदा पुन विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा पुग्नु को जिम्मेवार छ यसको जवाफ जनतालाई दिनुपर्ने देउवाले बताउनुभयो । यसको सवै जिम्मेवार प्रधानमन्त्री भएको र कार्यकारी अधिकारी प्रधानमन्त्रीलाई रहेपछि प्रतिपक्ष पनि सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहेको दावी गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्दा विपक्षिको भूमिकामा प्रश्न उठेको भन्दै सरकारका सकारात्मक कार्यलाई हरप्रहर समर्थन गरेको र विपक्षिलाई आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री भाग्न नमिल्ने देउवाको भनाई थियो ।
कोभिड का कारण जनताले आइसीयू भेन्टिलेटर नपाएर ज्यान गुमाउन परेको भन्दै सरकारले यसको रोकथामका लागि पहल नगरेको आरोप लगाउनुभयो ।
मध्यरातमा संसद विघटन गर्दै कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा मध्यावधि चुनावको मिति घोषणा २७ बैशाख २०७८, सोमबार १४:५२
सांसदहरु दोहोरिएपछि प्रधानमन्त्रीमा ओली र देउवाको दाबी नपुगेको राष्ट्रपतिको ठहर २७ बैशाख २०७८, सोमबार १४:५२
आज मात्रै २१४ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु २७ बैशाख २०७८, सोमबार १४:५२
नवलुरमा थप १० दिन निषेधाज्ञा लम्ब्याइयो २७ बैशाख २०७८, सोमबार १४:५२
कोरोनाबाट चितवनमा एकैदिन १५ जनाको मृत्यु २७ बैशाख २०७८, सोमबार १४:५२